VidMix Apk Dhawunirodha Mahara Yekushandisa Android [Yekupedzisira Vhezheni]
»VidMix Apk Dhawunirodha Mahara Kune Android
4 / 5 ( 55 mavhoti )
Tadzoka neimwe application yevaya vari kutsvaga free foramu kuona mafirimu, TV anoratidza uye Episode. VidMix Apk ndiyo ipuratifomu iyo iwe kwaunogona kuwana izvo zvese zvirongwa izvo iwe zvauri kutsvaga. Uyezve, ine mhando dzakawanda dzerudzi.
Pakutanga takamboongorora nekugovana mapurogiramu mazhinji anopa forum yakafanana neVidMix. Chaizvoizvo, iwo ese eaplayers ari akanakisa uye akasiyana munzira yavo pachavo. Asi isu tagamuchira zvikumbiro zvakawanda zveichi chinoshamisa application ndosaka tiri kuzochiongorora muchinyorwa chino.
Ndinovimba muchafarira iyi App pamwe nechino chinyorwa. Mushure me apo iwe uchaitwa nekuverenga iyi post, iwe unogona kutora iyo ichangoburwa vhezheni yeApp. Iko kune yakananga yekuburitsa link yakapihwa kumagumo ekutumira, saka ingo punga pane iyo link uye uwane iyo Apk.
Chii chinonzi VidMix?
Nzira yekuDhaunirodha Vidmix Apk?
VidMix Apk ndeye Android application yevashandi vemuMavhu mavanogona kuwana zviuru zveMafirimu, Tv-Shows, Series, Web Series uye zvimwe zvakawanda. Iyo ine akawanda mhando maficha uye iwe unogona zvakare kuwana mukana wekutamba mimwe mitambo mukati meiyo application.
Saka, izvo zvese zvinowanikwa zviripo mune imwe chete application. Iwe unogona kuwana maapuro akadaro kashoma uye isu tagara tiripo kuti tikuunzire zvinhu zvakadaro.
Iyo ine zvikamu zvakasiyana zvezvirongwa zvakasiyana izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti vashandisi vabate vavanofarira. Kazhinji, mune mamwe maapuro, haugone kuwana mhando yekusagadziriswa uye vanogovana zvese zvisingaite.
Nekudaro, zvinobva zvazoomera vashandisi kuchera kunze izvo izvo zvavanoda kuona kana kurodha. Chimwe chinhu chakanakisa chekushandisa iyi ndechekuti iwe unogona kutarisa Live Tv pane yako Android.
Iwe haugone kutenda asi ichokwadi kuti chinouya nemabasa mazhinji kana maitiro kunze kwemafirimu nemitambo. Chimwe chimwe chinhu chinonakidza icho munhu wega wega musikana waanoda kuva nacho mumapurogiramu akadaro isarudzo yekuodha yemavhidhiyo.
Nekudaro, iwe unogona kungobaya pane vhidhiyo yaunoda uye ipapo iwe unozotungamirirwa kunotora kurodha.
Kune akasiyana mafomu ekutora iwo mavhidhiyo, kutanga, iwe unofanirwa kufunga kuti yakawanda sei data package. Nekuti kana iwe uchirodha chero vhidhiyo yakazara yakazara HD mhando saka iwe unogona kurasikirwa yakazara data dhata.
Asi iwe unogona kutamba online izvo zvakakodzera zvakanyanya nekuti hazvitore nguva yakawanda mukutanga vhidhiyo. Uyezve, hapana nyaya yekunyepedzera inogona nyore kushanda pane 3G network.
zera 13.65 MB
Developer VidMix Chikwata
Package Zita com.vidmix.app
Inodiwa Android 5.0 uye Up
Ndatotaura nezvakawanda zveVidMix Apk mundima dziri pamusoro. Nekudaro, kana iwe usina nguva yekuverenga ichi chinyorwa chose, saka ndinokurudzira kuti iwe uverenge aya mapepa.
Nekuti kuburikidza neiyi akakosha mepu iwe iwe unosvika pakuziva izvo chaizvo zvinopa kune vateveri vayo. Nekudaro, kana iwe uri pane ino peji saka zvinoreva kuti unoda iyi app.
Inokupa iwe kuti utarise mafirimu, mabhaisikopo, Short mafirimu uye Episode.
Unogona zvakare kutenderera live TV chiteshi kubva kune anopfuura nyika gumi.
Iko kune chikamu chakaparadzaniswa kune avo vanoda kutamba mitambo zvakananga pasina kuadzunura ivo kune yavo Android zvishandiso.
Unogona kurodha pasi mavhidhiyo aunoda, mabhaisikopo, Zviratidzwa zveTV, Episode uye zvimwe zvakawanda.
Inokutendera kuti utambe mavhidhiyo kubva kuYouTube uye zvakare iwe unogona kudhonza YouTube mavhidhiyo.
Iwe unogona kuwedzera uye kuumba yako yega yekutamba.
Ikoko iwe unogona kutarisa mawebhusaiti iwe kwaunogona kuwana mukana wekuona uye kurodha mamwe mafirimu.
Iyo Vhidhiyo Inorodha sezvaunokwanisa kukopa URL yemavhidhiyo uye uiise mu URL bhokisi kuti uzvidire.
Uye zvimwe zvakawanda iwe unogona kuwana kubva kune ino chete app.
Ndine chokwadi mushure mekuverenga zvese zvakakosha maficha, iwe uchaenda kunotora iyi application. Asi iwe unofanirwa kuve neyakavimbika uye yakatwasuka download yekubatanidza yeiyo.
Nekudaro, isu takapa icho chinongedzo pakupera kwekutumira ichi. Ingo enda ipapo wobva wadzvanya kana wapeta pairi. Ukuru hwefaira idiki uye hahuzozotora anopfuura mashanu maminitsi.
Iwe unogona zvakare kuedza iyi inotevera app yekukodha vhidhiyo yezvinhu
VidMate-HD Vhidhiyo Downloader Apk
Kana iwe uchida kuwana zvimwe zvinoshamisa mapurogiramu seVidMix Apk yazvino vhezheni yeiyo nhare dzeApple, saka tizivisei. Isu tichaunza izvo zvako pano pane ino webhusaiti. Asi ikozvino, iwe unogona kunakidzwa neiyi inoshamisa chikuva uye kugovera mhinduro yako muchikamu chekutsanangura pazasi.
VidMix Ye Android
Copyright © 2021 RoidHub - Yakakwira Yakakwira Android Chitoro